Iindaba -Ukukhetha njani umatshini omkhulu wokubumba inaliti
Indlela yokukhetha umatshini wokulungisa inaliti enkulu
Ngenxa yokuba umatshini ziphene yokubumba sisixhobo ukuba ngenaliti iiplastikhi thermosetting kwi ngumngundo iimilo ezahlukeneyo ukuqonda ekubumbeni iimveliso zeplastiki. Oomatshini abakhulu bokwenza inaliti basebenzise ubukhulu becala ukufudumeza umbane ukufezekisa ukonga umbane, kunye nokusetyenziswa kwamandla kunye nokugcina amandla, isiguquli sokuhamba rhoqo sikhethwe ukutshintsha amaza ombane wezixhobo zokusebenza. Oku kuyakufezekisa ukuthembeka okungcono kwaye kufezekise ukuthembeka okukhulu Ukusebenza okuhle, ke ngoko kufuneka senze ukhetho olungcono olusekwe kwimeko eyiyo, kwaye ukuthembeka kuya kuphuculwa kakhulu.
Kakade ke, izinto zokonga umbane ezinkulu-isikali ziphene yokubumba kunye nomgangatho elungileyo ziyafezekiswa ngokwemiqathango zokufudumeza namandla. Ke ngoko, kubalulekile ukwenza ukhetho olungcono ngokwendlela eyiyo. Ukuqinisekiswa komgangatho ophunyeziweyo kuya kuba nokusebenza okugqwesileyo, ngenxa yoko kunokufikelelwa. Ukunyaniseka kuya kuphuculwa kakhulu. Khetha ukwazi ukuba isifudumezi esinombane sinokugcina ixesha lokufudumeza, sisebenze ngokuthe ngqo kumbhobho wokufudumeza, kwaye umaleko okhethekileyo wokugquma unokuphucula ukusebenza ngokufudumeza, ngelixa ubushushu buphezulu, njl., Ezizizathu zokuqinisekisa ukonga umbane ngakumbi. Kwixesha elidlulileyo, iikhoyili zokufudumeza ukumelana zazinokusebenza okuphantsi kunye nelahleko enkulu yobushushu, ngenxa yoko zazidla umbane kakhulu. Ke ngoko, iindleko zokuqhubekeka kweemveliso zeplastiki zonyuswe kakhulu.
Sikhetha elungileyo-isikali inaliti umatshini yokubumba ukuphumeza iziphumo ezilungileyo ugcino lwamandla. Sichaze ukonga umbane kwenxalenye yokufudumeza apha ngasentla. Ngoku sithetha kakhulu ngokonga umbane ngokwamandla. Ukuba izixhobo zifuna kuphela amandla angama-30HZ ngexesha lokusebenza, kwaye owona mandla wemoto unokuphakama, uya kubangela inkunkuma yamandla. Emva koko khetha isiguquli sokuhamba rhoqo ukulungiselela uhlengahlengiso ukuqinisekisa ukuba zingakanani izixhobo ezifunekayo. Ukuveliswa kwamandla kuxhomekeke ekubeni amandla aphuma phi, ke amandla okonga umbane anokufezekiswa ngokuqinisekileyo alungile, ke ukuthembeka okuphunyeziweyo kuya kuba ngcono.
Precision zeplastiki ziphene ziphene yokubumba, Thin Wall Inaliti Ukubumbela Machine, Precision Inaliti Ukubumbela, Precision Inaliti Ukubumbela Inc., Inaliti ngqo, Ukubumbela Precision,